Lapha kwafika eside elindelwe oneminyaka emithathu ubudala lapho umntwana kakade kungathatha ngokuphepha ezabo izinqumo onolwazi, ngaphandle-ke, inkinga Kuvezwe ngaphansi kwamandla akhe. Uthanda ukudweba kanye zakwazi ukujabulisa abazali bazo amaphethini ezintsha usithe ezibangela kubo, imizwelo kuphela. Kid uzama ukusiza umama nobaba kuzo zonke imisebenzi yasekhaya, kuhlanganise ukuwasha izitsha, ukuhlanza indlu, ngakho-ke, sicela umbuzo kanjani ukumaka usuku lokuzalwa kwengane (iminyaka engu-3 ubudala), okokuqala kunakho konke, kufanele sikhumbule ukuthi anakho ukuthatha ingxenye ngokuqondile yonke inhlangano leli holide. Lokhu kuzokuvumela ukuba abone isimo imikhosi oluzayo, kanye ukuthuthukisa amakhono abo creative.
Shaja ke, isibonelo, hang Balloons eqolo wonke ikamelo, usike izibalo anemibala, siqala engalingani, khetha amathoyizi ngalo uzobe edlala nge izivakashi. Xoxa nabo sihilela indaba yokuthi ubani afuna ukubona eholidini yakho, ngokuvamile, ukwenza ingane yakho bazizwe ikakhulukazi ngalesi ukugubha. Futhi indlela ahlele usuku lokuzalwa kwengane eminyakeni 3, thina ngeke kukusize ukuba baqonde lesi sihloko.
Ingane ngalesi yobudala kubaluleke kakhulu ukuthi konke emhlabeni agcwala futhi sasikhazimula, ngakho ukhetho best kulesi simo kuyoba Balloons, kuze kudabuke umhlane emibala, amaphosta ezimibalabala obonisa intandokazi cartoon izinhlamvu umntwana, izimbali, neminsalo (uma intombazane) nokuningi kungase liyafana iholide. Futhi, lesi sihloko kuyoba ezihlukahlukene dudelki, amakepisi, okhilikhethi. Akukho ukuthi ngemva ezinjalo kuyoba mayhem endlini, ngoba ngenxa a synuli omthandayo noma ntombazanyana eningakuthwala.
Uma uhlela ukuba umeme kuphela izimenywa abasebasha, kusengaphambili kuyodingeka ukuxwayisa abazali bazo ngalokho isikhathi kuyodingeka eyolanda izingane zabo. Kulokhu, kuhambisana kahle isimemo ukhombise impilo ukuthi, kanye esizayo lokuzalwa umfana ungenza ngokwakho.
Kungcono umeme abantu hhayi ningi than 3-4, njengoba izingane ngalesi yobudala namanje insufficiently ezimele futhi ukulandela kuyoba nzima ngabo.
Uma uhlela ukuba bameme izingane kanye nabantu abadala, kubalulekile lapha ukuze anakekele amatafula amabili - izingane kanye nabantu abadala.
Uma ukhathazekile mayelana nendlela bakhumbule usuku kokuzalwa kwengane (iminyaka engu-3), khona-ke kufanele kuqashelwe kusengaphambili izitsha ukuthi uzonikezwa izivakashi. Ezinganeni kulesi simo, main into - ezithakazelisayo design, ukuze usike imifino noma izithelo imifanekiso amahle ukwenza amasaladi ezimibalabala. tartlets Small ofakwe abahlukahlukene futhi kungenzeka Kiddies efanelekayo ukunambitha.
I uju main Yiqiniso, ngalesi ukugubha kuyoba ikhekhe, ngakho kusengaphambili ukuthenga amakhandlela amaningi, ngoba umntwana uyoba ukuwashaya ngaphezu kwesikhathi esisodwa.
Yilokho ezicashile inhlangano. Manje ake sixoxe ngendlela ukugubha ukuzalwa kwengane (iminyaka engu-3).
Impela, izinyane ngeke akuvuse up ekuseni ukuze uthole isipho ethenjisiwe, ngakho qiniseka ukuthi uyithenga, hhayi zichithe iholidi lakhe.
lokuzalwa Wengane - iminyaka engu-3 - uphakamisa izindikimba ngenhloso, kangcono uma kuyinto inganekwane, ngoba izingane kakhulu othanda izinto eziphathelene izinhlamvu lwasemaphusheni. Yenza ingane yakho uhlobo sobukhosi nomqhele wami, ake abe nomuzwa into ebaluleke kakhulu kulo mkhosi. Ukuze wenze lokhu, bopha kwesitulo abavamile nge ucwecwe emuva, futhi ngemva ingane iyohlala phansi ekuqaleni kwazo etafuleni, wagqoka umqhele wakhe. Kungenza ngokwakho noma ukuthenga esitolo.
Uma usafuna unamathele a fabulous indaba ephathwayo, cabanga kusengaphambili mayelana suit lapho umntwana uzohlangana izivakashi zakhe. Kungaba kuhle uma baxwayiswa kusengaphambili e isimemo noma ngokushayela ucingo abazali izivakashi abasha mayelana nezihloko ukugubha. Ingane yakho ngeke bathande, uma abangane bakhe ukuza lapho sebegqoke izingubo amahle.
Ukuze uzwisise ukuthi ukugubha usuku lokuzalwa kwengane (iminyaka engu-3), kufanele ucabange ukuthi uzothola izivakashi. Ukuthi izingane kudingeka ukuba amasudi, sishilo, kodwa kanjani ukuqinisekisa ukuthi izimenywa abasha baba nesithakazelo efanele usaqala holidi? Impendulo silula. Ngemva izipho ethulwa, cela Kiddies ekudwebeni inkumbulo lokuzalwa kwanoma iyiphi sibalo. Kungaba yini: ukubhala entendeni noma Isiqeshana kusuka iphepha ezinemibala, inqobo nje izingane waqaphela ukuthi nobuciko yabo kuzoncika ukuqhubeka iholide.
Ilungiselela itafula ngesikhathi samaholide, musa umunyu ngemibuzo mayelana nendlela ukugubha ukuzalwa. iminyaka engu-3 - akusiyo engu lapho izingane kudingeka zidinga ekuhambisaneni ezicini ezithile. Kuyinto party nje zezingane, futhi uma kukhona iya okungalungile - akunandaba, ake izinto ukuthatha inkambo yabo, ngoba izivakashi zisekhona encane kakhulu ngokuqinile ulandele noma imiphi imithetho.
Khumbula ukuthi izingane ngalesi yobudala musa ukuhlala etafuleni imizuzu engaphezu kwengu-10, ngakho-ke ingane lokuzalwa (iminyaka engu-3) - akusiyo ukudla kuphela, kodwa futhi umdlalo. Ukuze wenze lokhu, sicela amakhrayoni, izimpawu, iphepha ezinemibala, amathoyizi, amabhola, Bubbles, ukuze izingane kube yinto.
Isibaluli esemqoka yalolu iholide kuyoba ikhekhe. Izingane zayo uyobheka phambili. Lapha ungakwazi dream up. Ngokwesibonelo, hamba for ikhekhe, bese ubuyela emuva ekamelweni futhi zamemezela ukuthi lesi ikhekhe wayesehambile bese ubacela ukuthi ukusiza izingane ukuthole. Kuyinto ethokozisayo kakhulu. Kungenzeka ukucabanga kusengaphambili indlela izingane uzofuna ubumnandi zaziswe.
Ngemva ikhekhe ngeke, ka Isihlalo etafuleni cela lokuzalwa nishaye amakhandlela. Kuyoba kuhle kakhulu uma ngemva kwalesi senzo ingane izothola oluvela kuwe isipho. Akubalulekile ukuba kube ezibizayo, ngempela into egqamile. Kuhle kakhulu, uma usuku uyojabulisa izipho zayo ezithakazelisayo enganeni yakho kusuka lokhu kuzoba nje bajabula lonke.
Uma ukhathazekile mayelana nalolo daba kanjani ukugubha ingane lokuzalwa engu-3, kufanele banakekele mayelana nemincintiswano yokubona Kiddies wawubholwa. Sinikeza ongakhetha amaningana ezihlekisayo. Ungakhohlwa sibekele izingane ezincane kancane samanje ukubakhuthaza emva imincintiswano imidlalo.
Ngenxa yalesi mncintiswano Isihlalo izingane phansi bese uqale ukubonisa amakhadi abo nge izithombe zezilwane. Ubani ukunikeza izimpendulo ezifanele, onqobile.
"Ukuhlaba ikhefu zomculo"
Vula Kiddies umculo futhi uzivumele ukudansa i. Lena bayakwazisa kakhulu kubo.
Enye indlela ezithakazelisayo ezimayelana nendlela ukugubha ukuzalwa kwengane (iminyaka engu-3) - ukuthatha befuna izinto abhanqiwe. Ukuze wenze lokhu, lungiselela yebhangqa amagilavu, amasokisi noma Slippers. Omunye kuncike isikhundla phansi futhi umbhangqwana kubo pripryachte. Finder uncika umklomelo.
Lokhu kuyindlela enhle kakhulu ngoba kumnandi. Ukuze wenze lokhu, sibeke nezihlalo nhlangothi zombili futhi ukudonsa kwesihenqo. Mema abantu abadala iqhaza. Thatha onodoli ezimbalwa namathoyizi futhi ubonise abanye indaba Kiddies ajwayelekile.
Nanti elinye icebiso ezithakazelisayo sendlela ukugubha ukuzalwa kwengane (iminyaka engu-3) - ukumema izinto ezingasile. Uma lokhu kungeke kwenzeke, ungakwazi self-ufunde amacebo ambalwa elula futhi ubonise izingane zabo.
Vula umculo, ukuvumela izingane thatha ezandleni isizathu umdanso.
Bonisa izingane zakho ezinye ukunyakaza elula, kungcono uma dancing. Ngokwesibonelo, nezingane Fundisa "ukudansa amadada encane" noma ukubonisa indlela iya bear, ihhashi gallops, omasha amasosha kanye nokunye okufana nalokho. D.
Uma ingane izoba neminyaka engu-3 kanjani ukugubha usuku lokuzalwa, uma kungekho isifiso nesikhathi ukuhlela mkhosi? Kulokhu, ungasebenzisa izithombe amasevisi. Ziyakwazi iholide hhayi kuphela kahle futhi efanele ihlelwe, kodwa kumnandi kakhulu zonke izivakashi. Kuye izifiso zakho kanye nemithombo, abagqugquzeli kungaholela upopayi noma ezinye uhlamvu kumnandi. Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi izingane eziningi ngalesi yobudala besaba engingabazi Clowns.
Usuku lokuzalwa (iminyaka engu-3) Kufanele vele uhlale isikhathi eside inkumbulo ingane, futhi okubaluleke - kuyoba kakhulu abazali bami ngoba leli holide. Ngakho, zama ukunikeza kuye nge ukugubha uyakufanelekela futhi ungakhohlwa walithumba, ukuze bambonise isithombe enkathini amadala, ngisho noma uyahleka.
Indlela ukukhetha namanabukeni izinsana nge low-cut inkaba
Indlela ukwandisa amathuba okuthi ukhulelwe ngesikhathi nge-ovulation?
Ama-backpacks IsiQuechua: ukukhetha imisebenzi yangaphandle